Mahdi Guuled oo u ka hadlay war ka soo baxay Musharaxiin Madaxweyne -
Home News Mahdi Guuled oo u ka hadlay war ka soo baxay Musharaxiin Madaxweyne
Mahdi Guuled oo u ka hadlay war ka soo baxay Musharaxiin Madaxweyne
Ra’iisul wasaare ku xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay inuu aad ula yaabay war-murtiyeed ka soo baxay 12-ka musharax oo ka mid ah musharaxiinta xilka madaxweynaha Soomaaliya.
Mahdi Guuleed ayaa qoraalkiisa ku bilaabay, “Waxa aan aad ula yaabay qoraal sida la sheegay ka soo baxay mas’uuliyiin ku isman murashaxiinta Madaxweynaha ee doorashada 2020/21. Qoraalkaas oo lagu duraayo Guddiyada Doorashooyinka, waxaa ka muuqday kalsooni-darro, quus iyo niyadjab.”
Mahdi Guuleed ayaa qoraalkiisa si dadban ugu sheegay in guddiyada cusub laga soo dhex xulay shaqaalihii xafiisyada dowladda, isagoo tilmaamay in wax farqi ah aysan u dhaxeyn guddiyadii qabtay doorashadii 2016-kii iyo kuwaan.
“Waxa aan garan waayay faraqa u dhaxeeya Guddigii Doorashada heer Federaal iyo Somaliland ee 2016 iyo kuwa 2020 oo ay labadaba kasoo dhex muuqdeen wiilal iyo gabdho Soomaaliyeed oo labada xafiis u kala shaqayn jiray ama shaqeeya” ayuu yiri.
Ugu dambeyntii ra’iisul wasaare Mahdi Guuleed ayaa qoraalkiisa ku yiri, “Miyaanu arrinku ahayn “Hal” diiddani geed ay ku xoqoto ma waydo? Mise waa hawraartii Soomaaliyeed ee marka “Geela” loo heeso uu raggu “Gorayada” u heesi jiray? “Wallee ina ragow talo adduun, taada uun ma’ aha” ayuu hadalkiisa raaciyay.
Previous articleWest African countries, France calls for dialogue as post-election conflicts continue on Côte d’Ivoire
Next articleMaamulka gobolka Banaadir oo qirtey inuusan waxba ka qaban karin saameybnta ka dhalatay roobka
Dowlada Federalka oo sheegay in dowladu diyaar u tahay wadahadalada Midowga Musharaxiinta
Shirka u dhaxeeya Dowladda Federaalka iyo Dowlad Goboleedyada oo todobaadkan ka dhacaya….